Umaki: ukuhlolwa okuphelele | Martech Zone
Umaka: ukuhlolwa okuphelele
Amathiphu Nemikhuba Emihle Yokuhlola Ukuhlanganiswa Kwe-Salesforce
NgoLwesine, Januwari 19, 2017 NgoLwesihlanu, January 20, 2017 U-Amar Kukreja
Ukuhlolwa kwe-Salesforce kuzokusiza uqinisekise ukuhlanganiswa kwakho okusebenzayo kwe-Salesforce nezinye izinhlelo zokusebenza zebhizinisi. Isivivinyo esihle sihlanganisa wonke amamojula we-Salesforce kusuka kuma-akhawunti kuya ekuholeni, kusuka emathubeni kuya emibikweni, nasemikhankasweni kuya koxhumana nabo. Njengoba kunjalo ngazo zonke izivivinyo, kunendlela enhle (esebenzayo nefanele) yokwenza isivivinyo seSalesforce nendlela embi. Ngakho-ke, yini iSalesforce evivinya umkhuba omuhle? Sebenzisa amathuluzi wokuhlola afanele - ukuhlolwa kwe-Salesforce